Madheshvani : The voice of Madhesh - मधेशलाई गोलबन्द गर्न ‘गोलमेच सम्मेलन’ : देवराम मधेशी
राष्ट्रिय संयोजक, मधेशी महासभा
० मधेशी महासभा के हो ?
— अहिलेको वर्तमान अवस्थामा शासक दलका नेताहरूले मधेशमा लादेका कुराहरूलाई साथ दिने मधेशवादी दलहरूको यथास्थितिवादले मधेशी महासभाको आवश्यकता महसुस भएको हो । आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि मधेशलाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्रहरूलाई असफल बनाउन समग्र मधेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नका लागि हामीले मधेशी महासभा स्थापना गरेका हौं ।
० मधेशी महासभाले के गर्छ ?
— महासभाले मधेशी जनताको वास्तविक मूलभूत मुद्दाहरू, अर्थतन्त्र, समानताको अधिकारलाई जसरी राज्यले विभेद गर्दै आएको छ, त्यसलाई स्पष्ट गर्नका लागि जागरण अभियान चलाउँछ । मधेशमा राज्यले गरेको विभेदहरूलाई चिर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नका निम्ति मधेशी जनताको जल, जंगल, जमीन, भाषा, रहनसहन, सांस्कृतिक, सभ्यता, स्वाभिमान, पहिचान, सम्मानलाई रक्षा गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाउँछौं । मधेशका सम्पूर्ण जातजातिलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गरेर ‘मधेश गोलमेच सम्मेलन’ गर्नेछौं । यथास्थितिमा मधेशलाई चाहिएको सामग्री र अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि गोलमेच सम्मेलनबाट पारित एजेन्डाहरूलाई राज्य समक्ष राख्ने वा कुनै नयाँ शक्तिको उदय गर्नका निम्ति कार्यादेश तय गर्छौं ।
० अहिले नेपालमा तीन तहका सरकार छन्, तिनीहरूले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैन ?
— नेपालमा तीन तहको सरकार त छ तर तिनीहरूले आफ्नो अधिकारहरू पाउन सकेका छैनन् । सबै अधिकार अहिले पनि केन्द्रले नै राखेको छ । स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारकै मान्छे हुन्छन् । उसले मेयर वा अध्यक्षलाई अधिकार सम्पन्न तरिकाले चल्न दिनका लागि कानूनसँग मिल्दैन भनेर भन्छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको हकमा पनि केन्द्रले अधिकारहरू कटौती गर्दै गएको छ । उसलाई काम गर्नका लागि कर्मचारी छैन, आफ्नो सेना प्रहरी छैन, कर्मचारी भर्ना पनि केन्द्रले नै आह्वान गर्छ । तथाकथित नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशी, मुस्लिम, महिला, थारू, आदिवासी जनजाति लगायतका लागि ४५ प्रतिशत जुन आरक्षण दिएको थियो त्यो पनि केन्द्रले कटौती गरेको छ । यसरी हेर्दा कसरी मधेशका समस्याहरू समाधान होला त ?
० मधेशका समस्याहरू के देख्नुहुन्छ ?
— मधेशका समस्याहरू भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका छन् । मधेशका जनताहरूलाई मूलरूपमा चाहिएका आधारभूत अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित गरिएको छ । नेपालमा अहिले नामका लागि मात्रै सरकारहरू चलिरहेको छ, कामका लागि देखिएको छैन । यो अधिनायकवादी सरकार हो, जसले मनोमानी ढंगले चलिरहेको छ । मधेशका क्रान्तिकारी सपूतहरूलाई दमन गर्ने नीति राज्यको पहिला पनि थियो र अहिले पनि छँदैछ । हाम्रो चाहना भनेको भौगोलिक, सांस्कृतिक एकरूपताको आधारमा नेपालभित्र तीन वटा मात्र प्रान्त हुनुपर्छ । हिमाल भएको हिमाली प्रदेश, पहाड भएको पहाडी प्रदेश र झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेश प्रदेश हुनुपर्छ । तर, यहाँ सात–सात वटा प्रान्त बनाएर राज्यको आर्थिकतन्त्रलाई तहसनहस गरिएको छ ।
० भनेपछि नेपालमा तीन वटा मात्र प्रदेश उपयुक्त हुन्छ ?
— हो । भौगोलिक र सांस्कृतिक एकरूपताको आधारमा हिमाल, पहाड र मधेश प्रदेश नै उपयुक्त हुन्छ । कुनै देशको संविधान भनेको मूल कानून हुन्छ, जसमा मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जनताको भावनालाई समेटिएको हुन्छ । समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पनि निर्धारण भएको छैन । चार÷पाँच हजारमा पहाडबाट निर्वाचित भएका छन् भने मधेशमा एक लाखभन्दा बढीमा निर्वाचित भएका छन् । यो कस्तो समानता हो संविधानमा ? तीन वटा भूगोलले बनाइएको नेपाल हो । भौगोलिक र सांस्कृतिक हिसाबले प्रदेशको निर्माण भयो राष्ट्र पनि समृद्ध हुन्छ र जनता पनि समृद्ध हुन्छन् ।
० संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ ?
— समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले मधेशका जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड गरेर राज्यसत्तामा आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने चरित्र मात्रै देखिएको छ । तथाकथित मधेशवादी दलहरू राज्यसत्ताकै मतियारको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । उनीहरूले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्दै मधेशी जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्दै आएका छन् । अब त नेपालमा कुनै मधेशवादी दल नै रहेन । मधेशमा जनता अहिले अन्योलमा छ । त्यो अन्योलतालाई चिर्नका लागि पनि हामीले मधेशी महासभाको गठन गरेका छौं ।
० समाजवादी र राजपा नेपालले भनेअनुसार संविधान संशोधन भयो भने मधेशका समस्याहरू समाधान हुँदैन ?
— यो सम्भव छैन । किनभने यिनीहरूले वास्तवमा मधेशका समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेकै छैन । यदि मधेशका समस्याहरू समाधान भयो भने राजनीति गर्ने एजेन्डा नै रहँदैन । आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा मात्र उठाइरहने तर त्यसलाई पूरा हुन पनि नदिने अहिलेसम्म देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुभएको छ कि, संविधान संशोधन के–के एजेन्डामा गर्ने, अहिलेसम्म प्रस्तावै आएको छैन । यसबाट पनि प्रष्ट बुझिन्छ कि सत्तामा जानका लागि यो एउटा एजेन्डा हो, जसलाई सधैं जीवित राख्न चाहन्छन् । मधेशमा जति बेला संविधान संशोधनको माग उठ्दै थियो त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेका थिए । पुनर्लेखनको कुरा गरेर जनतालाई झुक्याएर त्यही संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा भाग लिन पुगे । त्यसैले, यिनीहरूका नाङ्गो चरित्र र प्रवृत्तिका कारणले गर्दा मधेश त अन्योलमा फँसिसकेको छ । अब यस्तो राजनीतिलाई समाप्त गरी समतामूलक समाजको निर्माणका निम्ति अब गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ ।
० तर, मधेशी जनताले अझै पनि यिनीहरूमाथि विश्वास गर्दै आएका छन् नि ?
— यिनीहरूले त विगतमा मधेशका जनतालाई ठूलठूला सपना देखाएका थिए । अब मधेशी जनताले सबैको चरित्र बुझिसकेका छन् । हामी मधेशी जनताका जनजागरण अभियान लिएर झापादेखि कञ्चनपुरको बेलौरीसम्म जान्छौं । मधेशी दलहरूले मधेशप्रति गरेका कार्यहरू र भेदभावहरूबारे जागरण अभियान चलाउँछौं । मधेशका क्रान्तिकारी युवा नेता रेशम चौधरी, जुन धारबाट निर्वाचित भएका छन्, त्यहीं धारबाट केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका हुन् । एउटै संविधान, एउटै नियम कानूनबाट एक जना निर्वाचित भएर देशको प्रधानमन्त्री बन्ने र रेशम चौधरीलाई जेलमा नेल लगाएर राख्ने, यो कति विभेदपूर्ण हो । यी कुराहरूको ठेकेदार मधेशी दलहरू होइनन् ? खोई आजसम्म मधेशी दलहरूले यी कुराहरूलाई लिएर मधेशी जनताबीच अन्तरक्रिया, सभा, जनसभा गरेको ? यिनीहरू आफ्नो कुर्सीका लागि मात्रै हो, मधेशी जनताका लागि केही पनि गर्न चाहँदैनन् । यिनीहरूको ‘हाइट वेट’ राज्यले पनि नापिसकेको छ र मधेशका जनताले पनि बुझिसकेका छन् ।
० भनेपछि, मधेशमा वैकल्पिक शक्तिको उदय हुँदैछ ?
— हो । मधेश अहिले वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छ, जुन तथाकथित मधेशवादी दलहरू हुनै सक्दैनन् । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मधेशीहरूबीच हामी जाँदैछौं । मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त परिवारका सदस्यहरूलाई राखेर, बुद्धिजीवीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर मधेश गोलमेच सम्मेलनको अवधारणा ल्याएका छौं । जसमा हामीले कम्तीमा १२ लाख मधेशीको उपस्थिति हुने आंकलन गरेका छौं । त्यो सम्मेलनबाट एक वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन्छ, जुन शक्तिले आफ्ना मुद्दा, एजेन्डाहरू तय गरेर मधेश मुक्तिका लागि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछ । मधेशी जनताको वर्तमान अवस्थाको चाहना भनेको ‘हम मधेशियों का एक ही आवाज, हमें चाहिए राज्य के न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में सौ में पचास ।’ मिलेर जानुहुन्छ भने देश बन्छ, विभेद गर्नुहुन्छ भने देश कुन खाल्डोमा जान्छ त्यसको ठेगान हुँदैन ।
० विगतमा मधेश अलग राष्ट्र बनाउने अभियान चलाएका डा.सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
— विगतमा उपेन्द्र यादवले पनि ठूलो क्रान्तिकारी मुद्दा उठाएर अहिले आएर त्यसलाई भजाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसरी नै डा.सीके राउतको पनि देखिएको छ । किनभने डा.सीके राउतले मधेशका युवाहरूलाई ठूलठूला सपनाहरू देखाउनुभयो । उहाँले आफ्नो मूल एजेन्डामा महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, गौतम बुद्ध, अब्राहम लिंकनको फोटो राख्नुभएको छ । त्यस्तो महान पुरूषहरूलाई आफ्नो आदर्श मान्ने तर आफू पाँच महिना जेल बस्न नसकेर तुरून्तै सरकारसँग सम्झौता गर्न पुग्ने हो भने महापुरूषलाई पनि बेचेर आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गरेको हो । उहाँले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै सम्झौता गर्नुभएको हो, मधेश र मधेशी जनताका लागि होइन ।